Ballerina Olga Kuraeva dia maneho fihetseham-po amin'ny alàlan'ny hetsika dihy malefaka | Famoronana an-tserasera
Jesus Arjona Montalvo | | sary, Inspiration
Ireo mpandihy dia mampiasa ny vatany ho fitaovana enti-miasa tsara, mampita ny eritreritra sy ny fahatsapana amin'ny alàlan'ny hetsika. Inona Olga Kureva manazava ao amin'ny Instagram, miaraka aminy ny dihy dia "Tsy filozofia fa tsy asa"fa fomba iray hanaovana maneho fihetseham-po. Kuraeva ao amin'ny Instagram dia tototry ny herin'ny tovovavy, sary manaitra ny vatany mihetsika izay mitantara tantara mahavariana.
Kuraeva mandihy miaraka amin'ny Bolshoi Ballet Academy, iray amin'ireo sekoly fampiofanana ballet taloha indrindra. Nandany fotoana sy ezaka be dia be tamin'ny fampiasam-bola ho an'ny fivoarany izy amin'ny maha mpanakanto sy mpandihy azy. Miharihary ny sary manaitra azonao Alexander Yakolev mihetsika. Niaiky ilay mpandihy fa aleony ny maka sary sy horonantsary, mifanohitra amin'ny fampisehoana an-tsehatra, noho ny fotoana nahazoany fotoana faharoa sy ny fahaizan'ny solomaso hisamborana fihetsem-po. Ilay mpaka sary Alexander Yakolev dia ilay manidina an'i Olga.
Manazava ny fijoroany amin'ny mangarahara tadiaviny amin'ny asany izy: Tsy mpilalao sarimihetsika aho. Raha tsy hampita fihetsem-po manokana aho dia tsy ho afaka haneho izany amin'ny alàlan'ny dihy. Tsy maninona na mandihy tsara aho na tsia, ny tena zava-dehibe dia ny tena izy aho «.
Ny dihiko dia tsy filozofia na asa, io no fomba ampitana ny fihetsem-poko. Tsy mpilalao sarimihetsika aho. Raha tsy hampita fihetsem-po manokana aho dia tsy ho afaka haneho izany amin'ny alàlan'ny dihy. Izaho dia nianatra dihy tao amin'ny Akademia Balleti Bolshoi tamin'ny fahazazako, ny fahazazako ary ny ankehitriny, saingy tsy manana sampy mpanao baleta aho. Tena aingam-panahy ahy ireo olona manao fanatanjahantena tafahoatra. Heveriko fa mahery fo izy ireo ary matanjaka be ara-pientanam-po. Ny fakantsary dia afaka misambotra fihetsem-po tena izy sy lalina. Hitako fa mivoatra amin'izany lalana izany aho amin'ny ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Ballerina Olga Kuraeva dia maneho fihetseham-po amin'ny alàlan'ny hetsika dihy malefaka